လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအထီးများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း - ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှု၊ အစာစားခြင်းရောဂါလက္ခဏာများ၊ ခန္ဓာဗေဒစတီးရွိုက်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဘဝ၏အရည်အသွေး (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသဘာ ၀
comments: လိင်တူမေထုန်နှင့်လိင်တူချင်းအမျိုးသား ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် porn ကိုသုံးကြသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြွက်သားများ၊ အစာစားခြင်းရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၊ anabolic steroids ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုမကြာခဏအတှေး; နှင့်ဘဝအရည်အသွေးနိမ့်။
Aust NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2017 စက်တင်ဘာ 1: 4867417728807 ။ Doi: 10.1177 / 0004867417728807 ။
Griffiths က S နဲ့1, Mitchison: D2, Murray SB3, Monde JM4,5.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္ဌာန်ဆက်စပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအထီးများအကြားအစာစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပညာနှင့်ဆက်စပ်သောယူဆချက် (၂) မျိုးကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအယူအဆမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းသည်ယောက်ျား၏ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှု၊ ရောဂါလက္ခဏာများကိုစားခြင်း၊ ခန္ဓာဗေဒ steroids ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဘဝ၏ချို့ယွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယယူဆချက်မှာအပြာစာပေအမျိုးအစားများ၊ ဆိုလိုသည်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အပျော်တမ်းအပြာစာပေရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည့်၊ စံပြမဟုတ်သော (ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်) ခန္ဓာကိုယ်များပါ ၀ င်သောဤအသင်းအဖွဲ့များကိုထိန်းညှိပေးလိမ့်မည်ဟုဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တွင်နေထိုင် 2733 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျားတစ်နမူနာ, ရောဂါလက္ခဏာတွေအစာစားခြင်း, ဟိုစတီရွိုက်များနှင့်ဘဝ၏အရည်အသွေးအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအတှေးအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအစီအမံပါရှိသောကြောင့်အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်း, ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုပြီးစီးခဲ့သည်။
နီးပါးအားလုံး (98.2%) ပါဝင်သူများတစ်လလျှင် 5.33 နာရီတစ်ဦးပျမ်းမျှအသုံးပြုမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။ Multivariate တိုးလာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြွက်သား, ခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့်အမြင့်နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါတလေ့လာဆန်းစစ်; သာ. ကြီးသောစားရောဂါလက္ခဏာတွေ; ဟိုစတီရွိုက်သုံးပြီးအကြောင်းပိုမိုမကြာခဏအတှေးအ; နှင့်အသက်တာ၏အနိမ့်အရည်အသွေးကို။ ဤအအသင်းအဖွဲ့များများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားတစ်ပုံစံတည်းအသေးစားခဲ့ကြသည်။ ကိုမကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကိုမျှမလိင်အင်္ဂါမကျေနပ်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဟို steroids အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကြံအစည်များအကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့အပျော်တမ်းညစ်ညမ်း၏ကြည့်ရှုခြင်းထက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညစ်ညမ်း၏ကြည့်ရှုသူများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအားနည်းစွာခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ် variable တွေကိုနှင့်အတူနှင့် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ် vs အပျော်တမ်း) ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားကိုကြည့်ရှုအားပေးအချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ဦးကိုစိစစ်အချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ cross-section လေ့လာမှုဒီဇိုင်းများ၏ကန့်သတ်အတွင်းမှာပဲအဲဒီတွေ့ရှိချက်, ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးမှီခိုနှင့်ဆက်စပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမမှန်အစာစားခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပြုမူဆက်ဆံသူကို Clinician များအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
KEYWORDS: ညစ်ညမ်း; ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို; အစာစားခြင်းမမှန်; မီဒီယာ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျား